Semalt Expert dia manaporofo ny hoavin'ny tranonkala
Ny fanasitranana ny tranonkala dia fitaovana iraisana amin'ny fanangonana angona avy amin'ny tambajotra. Ny filazàna fa zava-dehibe fotsiny ny fanakanana lehibe. Tena ilaina izany. Ny fampahalalam-baovao dia hery, ary misy fikambanana tsy misy fetrany, ka ny fanasitranana ny tranonkala dia ny rà nalehan'ny karazan'ny orinasan-tserasera.
Na ONG, orinasam-pambolena, fanombohana, orinasam-pandraharahana, na orinasa Fortune 500 aza, dia mihazakazaka tokoa amin'ny fampahalalam-baovao voaangona izy - computer in trade value. Noho izany, ny maha-zava-dehibe ny fanalana ny tranokala dia tsy azo ovaina.
Ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny orinasam-piarahamonina dia mbola tsy nitombo avo noho ny amin'izao fotoana izao. Ny mpilalao ao amin'ny indostria isan-karazany dia mampiasa ny fitaovam-piadiana rehetra ao an-toerana mba hifaninana. Vao haingana, ireo fikambanana dia nanomboka nampiasa rindrambaiko toy ny fitaovam-piadiana hiadiana amin'ny mpifaninana aminy. Raha ny marina, rehefa manana fampahalalana misimisy kokoa noho ny mpanohitra anao ianao, dia hanana tombony amin'izy ireo ianao. Ny fahalalana, hoy izy, dia hery. Na dia venty be aza ny indostrian'ny tranokala, dia azo sokajiana ho sokajy 3 ihany izy ireo, ary izy ireo dia:
Fananganana ny fampiharana manokana momba ny angon-drakitra na ny rindrankajy amin'ny tenanao na amin'ny fandrafetana programmers
Mandeha amin'ny serivisy tranonkala hafa
Fividianana rindrambaiko fanangonana angon-drakitra
Ny vahaolana telo dia manana tombony sy tombontsoa. Ankoatra izany, ny sokajy vahaolana mety indrindra ho an'ny orinasa rehetra dia miankina amin'ny filàn'ny tranonkala amin'ny filaharan'ny tranonkala.
Tahaka ny teknolojia hafa, ny fanasitranana ny tranonkala dia hitohy hivoatra sy hivoatra. Noho izany, ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny hoavin'ny tranonkala. Alohan'ny handehanana lavitra dia ilaina ny manamarika fa ny hevitra nipoitra tamin'ity lahatsoratra ity momba ny hoavin'ny tranonkala dia tsy misy afa-tsy ny sangisangy sy ny eritreritra fotsiny. Ny fametrahana izany ao an-tsaina, eto, ny hoavin'ny fitrandrahana tranonkala dia raisina amin'ny fomba fijery samihafa.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny artifisialy
Koa satria ampiasaina amin'ny sehatra rehetra ny tsiambaratelo, dia azo inoana fa hampiasaina amin'ny teknolojia amin'ny fomba maoderina ny teknolojia amin'ny alàlan'ny tranokala. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny robot entin-tsaina na ny milina dia noforonina mba hanara-maso ary manangona angon-drakitra ho an'ny orinasam-pamokarana samihafa.
Mazava ho azy, efa nampiasaina ho an'ny tranonkala ny robots, saingy tsy misy amin'izy ireo afaka miatrika fiovana lehibe eo amin'ny tranonkala kinendry raha tsy misy ny fidirana ataon'ny olombelona. Ohatra, raha miova ny fametrahana tranokalan'ny vohikala, ny fitaovana maoderina amin'ny tranokala dia tsy ho afaka hanasitrana ilay tranokala raha tsy ampiasain'ny mpampiasa kely ilay fitaovana. Tsy ho olana ho an'ny robot web raitra amin'ny aterineto izany, satria afaka hampiasa ny fahamendrehany izy ireo hiatrehana ny fanovana rehetra eo amin'ny toerana kendren'izy ireo mandritra ny fanivanana tranonkala miaraka amin'ny fidirana an-tsokosoko kely na tsy misy. Tsy ho ela dia hatsangana izy ireo raha tsy efa noforonina.
Avy amin'ny Google
Ny Google (groupe) lehibe indrindra dia Google satria ny orinasam-pandraharahana lehibe dia ny mikaroka sy manakona ireo tranonkala ary manaparitaka tranokala isan-karazany sy ny rohy rehetra. Izany dia mety hanomboka hanolotra tolotra tranonkala amin'ny tranonkala Google. Ary raha izany no izy, dia io no orinasa lehibe indrindra sy orinasa tsara indrindra manerantany satria efa mipaka amin'ny Internet izany. Ny mpividy ihany no mila manonona ny URL misy ny tranonkala ho an'ny tranonkala, ary hahazo ny votoaty rehetra ilainy amin'ny Google. Raha ny marina, ny votoatin'ny tranonkala rehetra dia efa ao amin'ny tahiry amin'ny endriny.
Ny antony iray hafa amin'ny Google dia manomboka mamerina tolotra tranonkala dia tsy mitaky ezaka fanampiny na ezaka fanampiny hanaovana famonoana izany. Ny orinasa dia mbola velona amin'ny alàlan'ny ny tranonkala miondrika. Ny fananana ny angon-drakitra takiana amin'ny fotoana rehetra dia hanolotra Google amin'ny fanodinkodinam-peo amin'ny aterineto izay tsy ahafahan'ireo hafa mpanome tolotra hafa hahaleo.
Satria ny Google dia afaka manolotra ny serivisy tsy misy ezaka fanampiny, dia mety hanome ihany koa ny vidin'ny fifaninanana izay tsy misy fikambanana hafa afaka mifanaraka. Tahaka ny fomba noraisin'ny orinasa tamin'ny indostrian'ny sehatry ny fikarohana, mety haka ny sehatry ny tranonkala ihany koa i Google amin'ny farany. Ny mahasamihafa dia mahasoa azy.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny fandalinana sy ny fandaminana
Na toy inona na toy inona ny vidiny dia tsy ilaina ny kiraro amin'ny lehilahy tsy misy tongotra. Noho izany, ny data dia mety tsy ho ampiasaina amin'ny fandaminana miaraka amin'ny fahaiza-manao mahomby. Raha ny marina dia tsy tena ilaina ny angon-drakitra, toy izany no azonao ampiasaina. Noho izany, rehefa manohy manamafy ny ezaka fanadiovana ataon'izy ireo ny orinasa dia hanomboka hanaparitaka ireo loharanom-baovao maro hafa koa izy ireo amin'ny fampiasana fanadihadiana matihanina matihanina na mampiofana ny mpiasa amin'ny fandaminana ny data, ary ny fanadihadiana momba ny angona.
Raha jerena ireo tahirin-kevitra mitovy amin'izany, ny fikambanana sasany dia hampiasa azy io kokoa noho ny hafa. Izany fotsiny ihany satria manana olona manana fahaiza-manao fanadihadiana tsara kokoa izy ireo. Noho izany, ny hoavin'ny tranokala dia mety hisy fiantraikany amin'ny fangatahana ny fandaminana sy ny fanadihadiana.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny fiarovana
Ny ankamaroan'ny fitaovana fandinganana tranonkala dia mety tsy hahomby intsony satria ny fikambanana maro dia hanohy hampitombo ny ezaka amin'ny fanatsarana ny tranonkala. Tamin'izany fotoana izany ihany, ireo orinasa mampiasa fampiasana tranonkala fidirana amin'ny tranokala hafa na ireo izay nampiasa fitaovana tena goavana dia mbola afaka manala ny angona avy amin'ny vohikala hafa.
Ho famaranana dia zava-dehibe ho an'ny fikambanana ny manomboka maneho ny heviny momba ny hoavin'ny tranonkala. Ireto misy dingana ilaina azonao heverina ho:
1. Tokony hanomboka hiasa amin'ny fampivelarana robots manokana ianao amin'ny alalan'ny fitaovam-pandrafetana kanto izay handaminana ny angon-drakitra tokony hoeritreretinao ilaina.
2. Tokony hampitombo ny ezaka ataonao eo amin'ny fikarakarana ny tranokalanao ho sarotra. Ahoana raha toa ny sasany amin'ireo mpifaninana aminao dia afaka mijery ny votoaty ao amin'ny tranokalanao raha tsy azonao amboarina ny azy? Tadidio fa ny fampahalalana bebe kokoa anananao momba ny mpifaninana aminao dia ny fahafahanao mandresy azy ireo.
3. Tokony hanomboka hiasa amim-pahamalinana koa ianao amin'ny fanatsarana ny fandaminana momba ny fandraketana sy ny fanadihadiana. Azo ampitahaina amin'ny toe-javatra misy ady izany. Indraindray, mety ho tafintohina amin'ny fampahalalam-baovao misy ny mpifaninana na ny mpifaninana ianao. Ny fampahalalana dia tsy ampiasaina raha tsy azonao atao ny mamaky azy haingana araka izay tratra. Ireo mpampiasa matihanina manana traikefa dia matetika mahatsikaritra ny fironana sasany amin'ny angon-drakitra voatonona mora loatra ka mety ilainao hanofana mpivady roa.
Amin'ny lafiny iray, ny fahafahana manomana ny fikambanana ho an'ny hevitra momba ny angona lehibe sy ny hoavin'ny fanangonam-pejy dia hanana anjara toerana manan-danja amin'ny fahombiazan'ny orinasanao.